အမျိုးသမီးများအတွက် Breathable Sports Bra & Leggings ၂ ခုစီ ၂ လုံးစီဝယ်ပါ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
အရောင် Black ကသတ်မှတ်မည် အပြာရောင်သတ်မှတ်မည် အပြာရောင်ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်မည် ပန်းရောင် B ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်သည် အနက်ရောင်ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်သည် ကော်ဖီဘောင်းဘီတို ခရမ်းရောင်တစ် ဦး ကဘောင်းဘီတိုသတ်မှတ်မည် ပန်းရောင်တစ်ဘောင်းဘီတို ခရမ်းရောင် B ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်မည် ပန်းရောင်သတ်မှတ်မည် Khaki ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်မည် Khaki Set ခရမ်းရောင်အစုံ မီးခိုးရောင် Set Dark Grey အစုံ အမှောင်ခရမ်းရောင်အစုံ ပန်းနုရောင်အစုံ ကော်ဖီအစုံ အစိမ်းရောင်ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်မည်
အနက်ရောင် Set / L အနက်ရောင် Set / M အနက်ရောင် Set / S အပြာရောင် Set / L ကို အပြာရောင် Set / M အပြာရောင် Set / S အပြာရောင်ဘောင်းဘီတို Set / L အပြာရောင်ဘောင်းဘီတို Set / M အပြာရောင်ဘောင်းဘီတို Set / S ပန်းရောင် B ဘောင်းဘီတိုများ၊ ပန်းရောင် B ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်သည် / M ပန်းရောင် B ဘောင်းဘီတို Set / L အနက်ရောင်ဘောင်းဘီတို Set / S အနက်ရောင်ဘောင်းဘီတို Set / M အနက်ရောင်ဘောင်းဘီတို Set / L ကော်ဖီဘောင်းဘီတို Set / L ကို ကော်ဖီဘောင်းဘီတို Set / M က ခရမ်းရောင်တစ် ဦး ကဘောင်းဘီတို Set / M က ခရမ်းရောင်တစ် ဦး ကဘောင်းဘီတို Set / S ကို ပန်းရောင်တစ်ဘောင်းဘီတို Set / M ပန်းရောင်တစ်ဘောင်းဘီတို Set / S ကော်ဖီဘောင်းဘီတို Set / S ပန်းရောင် A ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်သည် / L ခရမ်းရောင် B ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်မည် ခရမ်းရောင် B ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်သည် ပန်းရောင်အစုံ / S ခရမ်းရောင် B ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်သည် Khaki ဘောင်းဘီတို Set / S ခရမ်းရောင်တစ် ဦး ကဘောင်းဘီတို Set / L ကို Khaki ဘောင်းဘီတို Set / L ကို Khaki ဘောင်းဘီတို Set / M က Khaki Set / S ကို ခရမ်းရောင်အစုံ / L ကို Khaki သတ်မှတ်မည် / L ကို Khaki သတ်မှတ်မည် / M က ပန်းရောင်အစုံ / L ပန်းရောင် Set / M ခရမ်းရောင်အစုံ / M က ခရမ်းရောင်အစုံ / S မီးခိုးရောင်မီးခိုးအစုံ / S အမှောင်မီးခိုးရောင်သတ်မှတ်မည် / M အမှောင်မီးခိုးရောင်သတ်မှတ်မည် / L Dark Grey အစုံ / S မီးခိုးရောင် Set / L မီးခိုးရောင် အမှောင်ခရမ်းရောင်အစုံ / S ပန်းနုရောင် Set / S ကော်ဖီ Set / L ကို ပန်းနုရောင် Set / L ပန်းနုရောင် Set / M အမှောင်ခရမ်းရောင်အစုံ / L အမှောင်ခရမ်းရောင်အစုံ / M ကော်ဖီ Set / M က ကော်ဖီအစုံ / S အစိမ်းရောင်ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်မည် / M အစိမ်းရောင်ဘောင်းဘီတိုများသတ်မှတ်မည် / L အစိမ်းရောင်ဘောင်းဘီတို Set / S
2 Pieces Set Breathable အားကစားဘရာနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် Leggings - အနက်ရောင် Set / L backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: 65% polyester, 25% နိုင်လွန်နှင့် 10% spandex
Рост 177. 85-69-100 ။ Идеальный!
ဖောက်သည် 5.0 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 107443 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။